Ubuzwe baseVanuatu: Isimemo esivela epharadesi
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Ukuhamba Ngebhizinisi » Ubuzwe baseVanuatu: Isimemo esivela epharadesi
UJames-Maxwell-Harris noMnu BastienTrelcat
IVisa-mahhala eYurophu, iRussia ingenye yezinzuzo isakhamuzi saseVanuatu esizijabulelayo. IVanuatu imema umhlaba ukuthi ube yizakhamizi ezikanye nawo. IRiphabhlikhi yaseVanuatu kule nyanga ithumela ithimba likaHulumeni eBangkok ukuyoqhuba uchungechunge lwezithangami ezithinta ezohwebo, ezokuvakasha kanye nobuzwe ngokutshalwa kwezimali kuleli zwe eliyisiqhingi saseNingizimu Pacific.
Owayekade eyiBrithani neFrance Colony, iVanuatu (phambilini iThe New Hebrides) yathola inkululeko ngo-1980 futhi isalilungu leBritish Commonwealth. Ilula ibanga elingamakhilomitha angaba ngu-1,300 83 enyakatho iye entanjeni eseningizimu yeziqhingi ezingama-65 (abantu abangama-285,000), inani labantu baseVanuatu abangama-2016 lijabulela ukunconywa ngokuba yizindawo eziyisihlanu “ezijabulisa kakhulu emhlabeni” ngokusho kwe- “Happy Planet Index” yango-XNUMX. I-Vanuatu ingonakalisiwe ukuvakasha okukhulu, inezinhlobonhlobo zezinto ezikhangayo kusuka ekutsheni emanzini emanzini acwebile, kuya ekushiseni umlotha emithambekeni yentaba-mlilo esebenzayo. Izwe eliphephile, elinokuthula, iVanuatu ayinabutho elisemthethweni futhi lithembele ekuvikelekeni kwayo e-Australia engomakhelwane.
Ithimba laseVanuatu, eliqokelwe lo msebenzi nguNdunankulu waseVanuatu uCharlot Salwai uzovakashela iThailand phakathi neminyaka engama-25.th-29th Septhemba. Ingqophamlando yalolu hambo ukuxhasa ukwethulwa kwenethiwekhi yomhlaba wonke yamahhovisi agunyazwe nguHulumeni ngaphansi kophawu lwe- “Vanuatu Information Centre” (VIC).
Indlunkulu ye-VIC isePort Vila, eVanuatu, kepha iBangkok ikhethwe njengesikhungo semisebenzi yomhlaba ye-VIC, inikezwe indawo yayo, futhi ilula njengehabhu lokuhamba ngendiza lamazwe omhlaba. Ukusuka eBangkok, iCapital Port Vila yaseVanuatu itholakala kalula ngeBrisbane, eSydney noma e-Auckland, kepha kwenziwa amalungiselelo okuqhuba izindiza eziqonde ngqo ezisuka eBangkok ziya eVanuatu, ukuze kuthuthukiswe izixhumanisi zezohwebo nezokuvakasha endaweni yase-Asia Pacific.
Umsebenzi osemqoka wenethiwekhi ye-VIC ukusebenza njengesiteshi sokumaketha sohlelo lweVanuatu oluthi “Citizenship by Investment” Program (CIP). Lolu hlelo lunikeza abantu ngabanye ithuba lokuthola i-Honorary Second Citizenship ku-Free Free, izwe elingamalungu eBritish Commonwealth, ngenhloso yokunikela ngeZikhwama Zokuthuthukisa Uhulumeni waseVanuatu.
Le ndlela ebizwa ngokuthi yi-Vanuatu “Development Support Programme” (DSP), lolu hlelo lobuzwe ngumthombo obalulekile wemali yentuthuko yezwe. Abaphathi bephasiphothi baseVanuatu bajabulela izinzuzo ezinkulu - njengokuhambela mahhala ama-visa emazweni angama-125 - kufaka phakathi i-UK, iSchengen Europe neRussia - amazwe amaningi engezwa unyaka nonyaka.
Okubizwa ngama- “CIP” kusabalele emazweni aseCaribbean futhi sekuqhume udumo eminyakeni eyishumi eyedlule, kodwa-ke, i-DSP yaseVanuatu ihlukile njengeyokuqala, futhi yi-CIP kuphela yohlobo lwayo e-Asia Pacific Hemisphere - enenzuzo ecacile yendawo. emakethe ye-APAC.
Ama-CIP athola ukuthandwa ngokushesha - ikakhulukazi phakathi kwe-High Net-Worth Individuals (HNWI) efuna izinzuzo ezinikezwa ngokuba nepasipoti yesibili, kokubili ukwenza lula ukuhamba kwamazwe omhlaba kanye nokuvikeleka komuntu siqu - kanye nobuzwe endaweni ephephile, “indawo yentela” . I-Thailand bekungakaze kube ngumholi wemakethe ngokwabantu abafuna ubuzwe besibili, kepha abahlali baseThai kanye nabahlali bakwamanye amazwe ngokuya ngokuya baphendukela kuma-CIP njengento ebaluleke kakhulu kuphothifoliyo yabo yempahla.
Ephawula ngohambo oluzayo lwethimba, uSihlalo we-VIC noMhlonishwa Consul waseVanuatu oya eVietnam, (Lord) uGeoffrey Bond uthe, “Uhlelo Lokuxhaswa Kwentuthuko lunikeza inkululeko yokuhamba emhlabeni wonke, kodwa okubaluleke ngokufanayo, inikeza iphasiphothi epharadesi langempela lokho kunikeza amathuba amangalisayo kwezokuvakasha, zokuphila, kanye nokutshalwa kwemali. Simeme leli thimba ngenhloso yokunikeza ithuba amaqembu athintekayo ukuhlangana futhi akhulume ngqo nabamele uHulumeni waseVanuatu, ukuze baqonde kangcono amathuba ahlukile iDSP kanye neVanuatu uqobo olunikeza wona ”.
Ngaphezu kokukhuthaza ezokuhweba nezokuvakasha, ithimba laseVanuatu lizobe lifuna ukuvula izingxoxo mayelana nokutholakala kwama-visa eVanuatu mahhala eThailand, njengoba abaseThai Nationals sebevele bethola izinsuku ezingama-30 zokungena eVanuatu ngaphandle kwama-visa. Ukuhamba okunjalo kuzothuthukisa kakhulu ukuthandeka kweThailand njengezindawo zokuhamba zabahambi nokubuya eVanuatu, kepha futhi kukhuthaze ukuthuthukiswa okusheshayo kwezohwebo nezokuvakasha phakathi kwala mazwe womabili.
Leli thimba liholwa nguMhlonishwa Andrew Solomon Napuat Ilungu lePhalamende, uNobhala wePhalamende eMnyangweni Wezangaphakathi, enephothifoliyo yePassport & Immigration Services. UMhlonishwa Andrew Napuat wachaza, “Kuyangijabulisa ukwenza lolu hambo lokuqala eMbusweni waseThailand. Egameni likaNdunankulu wethu, uMhlonishwa uCharlot Salwai, ngizobe ngihola iqembu labamele uHulumeni, ngamunye wabo enikeza ubungcweti obufanele, ukunika amandla izithangami ezigcwele ezizoxoxa ngazo zonke izici zamathuba ezentengiselwano nezokuvakasha, kanye nohlelo olusanda kwethulwa lwaseVanuatu lokuba yisakhamuzi uHlelo Lokusekelwa Kwentuthuko. Ngibheke phambili kakhulu ekuthuthukiseni ubudlelwano bethu neThailand ngenzuzo yethu yomunye nomunye.
Okumaphakathi nalolu hambo kuzoba umcimbi lapho ithimba lizodlulisa khona incwadi esemthethweni yokuqokwa kweHarvey Law Group (www.arveylawcorporation.com) njengommeleli wokuqala womhlaba wonke weVanuatu Development Support Programme.
UMnu James Harris, uMqondisi Ophethe wenethiwekhi ye-VIC uphawule “ukuqokwa ngokusemthethweni kweHarvey Law Group njengommeleli womhlaba jikelele kusho ukuphakama okukhulu kwiprofayili yoHlelo Lokuxhaswa Kwentuthuko, ngokuhambisana nesifiso sethu sokuthola isikhundla sokuba ngomunye womhlaba Ubuzwe obuholayo ngezinhlelo Zokutshalwa Kwezimali. IHarvey Law Group, ngamandla abo nokujula kwabo e-Asia Pacific kukhombisa ngokuphelele okwethu njengamanje esifundeni. Silangazelela kakhulu ukuxhasa iHarvey Law Group kulolu hlelo olusha ”.
Njengoba amahhovisi amahlanu aseqalile ukusebenza e-Asia nenethiwekhi ethuthuka ngokushesha yama-ejenti, i-VIC ihlose ukuba seChina nase-UK ezinyangeni eziyisithupha ezizayo, futhi ikhule ibe ngama-geographies angeziwe ngonyaka we-2018.
I-VIC Network njengamanje inweba iPort Vila, iBangkok, iHo Chi Minh, iHanoi, iPnom Penh, iHong Kong.
Izihambeli ezinhle zendiza ye-bikini zihlanganyela ku-Balloon Fiesta
I-UNWTO yethula umncintiswano wabahambi ukukhuthaza ukusimama
Imali Engenayo Nenzuzo Ikhuthazwa Isidingo Esiphakeme Sabagibeli...